Orange Avenue Motel | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » Orange Avenue Motel	25
Orange Avenue Motel
Posted by padonmar on Mar 2, 2015 in Creative Writing, Editor's Choice, Education | 25 comments
ကျမငယ်စဉ်က အင်္ဂလိပ်စာကို ၅တန်းရောက်မှ စသင်ရပါတယ်။ ABCD သင်တော့ A for Apple=ပန်းသီး B for Ball= ဘောလုံး …. O for Orange=လိမ္မော်သီးဆိုပြီး အားရပါးရ အော်ဆိုခဲ့ရပါတယ်။ အရောင်တွေသင်တော့လည်း Orange=လိမ္မော်ရောင်လို့ သင်ခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၂၀ကျော်မှ ဆရာမြတ်ထန်ရဲ့ “လိုက်ပါရစေ ရွှေနွယ်ရိုးရယ်” ဆိုတဲ့ ဝတ္တုအဟောင်းကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ဆရာရဲ့ဇာတ်လိုက်က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံမှာ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့နဲ့သွားရင်း တွေ့ရတဲ့ လိမ္မော်သီးတွေအကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ တကယ်တော့ Orange ဆိုတာ ရှောက်ချိုသီးကို ခေါ်တာပါတဲ့။ အခွံပွပွနဲ့ လိမ္မော်သီးရဲ့နာမည်အမှန်က Tangerine လို့ခေါ်ပါသတဲ့။
Wiki ကနေ ရှာထားတဲ့ orange ပါ။ရှောက်ချိုသီးပုံဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းဆိုဖို့ ရူးခဲ့တဲ့အချိန် ဂျိမ်း(စ)ဘွန်း ရုပ်ရှင် Dr.No ထဲမှာ မင်းသမီး Ursula Andress ဆိုပြသွားတဲ့ Underneath the mango tree ကို အလွတ်ကျက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီထဲက Mango,Banana and Tangerine လို့ဆိုရင် ဒီဟာ ဘာသီးကြီးပါလိမ့်ဆိုတဲ့ စိတ်ကဖြစ်မိတယ်။ လက်စသပ်တော့ Tangerine ဆိုတာ လိမ္မော်သီးကိုး။
Grocery Store ဆိုတာကို ရောက်ဖူးချိန်မှာ ပထမဆုံးသွားစပ်စုကြည့်မိတာကတော့ အဲဒီ Orange နဲ့ Tangerine ပါပဲ။ တကယ်ပဲ Orange ဆိုတာ အခွံကျစ်ကျစ်အသားနဲ့ကပ်နေတဲ့ ရှောက်ချိုသီးဖြစ်ပြီး Tangerine အမျိုးမျိုးကတော့ အခွံအလွယ်တကူခွာလို့ရတဲ့ လိမ္မော်သီးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျမတို့ဆရာ ဆရာမတွေ ခမျာ King’s Way Dictionary ပုံပြအဘိဓာန် လောက်အားကိုးပြီး သင်ရတဲ့ခေတ် ဆိုတော့ ကျမတို့ အမှားသိခဲ့ရတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒီရှောက်ချိုသီးနဲ့လိမ္မော်သီး မကွဲတာလေးလောက်ကလည်း ပြဿနာ မကြီးလှပါဘူး။ …………………………………..
နောက်ထပ် အလွဲမှတ်ထားမိတာကတော့ Road=လမ်းမကြီး ၊ Street=လမ်းကျဉ်းဆိုပြီး အော်ကျက်ခဲ့ ရတာပါပဲ။ ကျမတို့နယ်မှာတော့ အားလုံးက Road တွေချည်းပဲဆိုတော့ မသိသာပါဘူး။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ 17th Street ဆိုတာကလည်း လမ်းကျဉ်း ၊ Mahabandoola Street, Bogyoke Aung San Street ဆိုတာတွေက လမ်းကျယ်ကြီးတွေဆိုတော့ မျက်စိလည်သွားပါတယ်။ အဲဒါကို အသက် ၃၀လောက်ရှိမှ Top English Magazine ကို ဖတ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရပါတော့တယ်။
Road ဆိုတာ လမ်းဘေးတဖက်တချက်မှာ ခြံဝင်းလေးတွေရှိတဲ့လမ်း။
Street ဆိုတာ လမ်းဘေးမှာ ခြံမရှိပဲ တိုက်တာအမြင့်အထပ်တွေ ခြံရံထားတဲ့လမ်း။
Avenue ဆိုတာ လမ်းလယ်/လမ်းဘေးမှာ သစ်ပင်စိုက်ထားတဲ့ ရိပ်သာလမ်း။
Boulevard ဆိုတာ တဖက်ပိတ်လမ်း။(a wide street typically one lined with trees ဆိုတော့ သူကလည်း Avenue နဲ့တူတူလို့ ပြောချင်ပုံရတယ်။ကျမတို့ငယ်ငယ်ကမှတ်ထားမိတာကတော့ တဖက်ပိတ်လမ်းပါပဲ။Sunset Boulevard ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တခုတောင် ရှိသေးတယ်။သုမောင် ၀တ္ထုပြန်ရေးထားသလားလို့၊ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးတယောက်ရဲ့ ဇာတ်ရှုပ်အကြောင်းပါ)
Lane ဆိုတာ လမ်းသွယ်။
Court (ကော့လို့ အသံထွက်ရပါတယ်/ High Court ဟိုက်ကုတ် ဆိုတာနဲ့ စာလုံးပေါင်းတူတူပါ။) ဆိုတာ ဝင်းအဝတဖက်မှာ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိပြီး အိမ်တွေက မြင်းခွာပုံလို တည်နေကြတဲ့လမ်း။အခု မင်းဓမ္မလမ်းမှာ Palm Court Villa ဆိုတဲ့ အိမ်ရာရှိပါတယ်။အဲဒီမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
Trail ဆိုတာက လူလျှောက်လို့ဖြစ်တဲ့ခြေသွားလမ်း။
Path ဆိုတာက တစုံတခု သွားနေကျဖြစ်တဲ့လမ်း။
Orbit ဆိုတာက ဂြိုလ်သွားလမ်း။
(America မှာတော့ Drive ဆိုတာရှိသေးတယ်။ အဲဒီအသုံးအနှုန်းတော့ ကျမလည်း မသိဘူး)
အရင်က အသုံးအနှုန်းတွေအတိုင်း လိုက်သုံးရင်တော့ မမှားပေမယ့် စည်ပင်က ဆိုင်းဘုတ်တွေ အသစ် ပြင်တပ်တဲ့အချိန်မှာ အလွဲတွေ ထွက်လာတော့တာပါပဲ။ လမ်းတဖက်တချက်မှာ ခြံတွေရှိတဲ့ ရှင်စောပုလမ်းက Shin Saw Pu Street တဲ့။ အရင်က ဗဟိုလမ်းမကြီးကို ရှမ်းလမ်းလို့ခေါ်ပြီး သူကခွဲထွက်တဲ့လမ်းသွယ်လေးကို Shan Lane ရှမ်းလမ်းသွယ်ဖြစ်ရမှာ ၊ အခုတော့ ရှမ်းလိမ်လမ်း Shan Lain Street တဲ့။ ရှမ်းတွေ အဲဒီလမ်းမနေရဲအောင်ပါပဲ။
(မှတ်ချက်-ဒီစာရေးထားတာကြာပါပြီ။ဓာတ်ပုံက 2014 အောက်တိုဘာမှာ သွားရိုက်ထားတာ။ကျမသွားရိုက်ပြီး မကြာခင် ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။)
Avenue =a broad road or path especially one lined with trees လို့ဆိုထားပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်မှာကို လမ်းဆိုတာ ပါပြီးသားမို့ Avenue road လို့ မသုံးသင့်ပါဘူး။တနေ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းဒေါင့်မှာ မီးပွိုင့်ပိတ်နေတုံး လမ်းဆိုင်းဘုတ်ကြည့်မိတော့ University Avenue Road လို့တွေ့မိတယ်။ University Avenue/U Wisara Avenue ဆိုရင် လုံလောက်ပြီပေါ့။
Avenue Road တဲ့။
အခုခေတ်လို Dictionary တွေ အလွယ်တကူရနေချိန် ကွန်ပျူတာထဲကလည်း အလွယ်ကြည့်နိုင်ချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေလည်း အများကြီးဝင်လာချိန်မှာ ဒီလိုအမှားတွေတတ်နိုင်သလောက် စင်စေချင်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးတွေ့ရပြန်တာက မိတ်ဆွေတယောက် သူ့တို့အိမ်ကို ဟိုတယ်လေးအဖြစ် ပြင်ဆောက်ပြီး ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ……Motel လို့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားပါတယ်။ သူတို့ဖွင့်တဲ့နေရာက ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တခုထဲမှာပါ။ တကယ်တော့ Motel ဆိုတာ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေ ဘေးမှာ ကားရော လူပါ အနားယူ အိပ်စက်စားသောက်လို့ ရတဲ့ဟိုတယ်တမျိုးပါပဲ။
လူတွေခေတ္တခဏတည်းခိုကြရာမှာ Service ဝန်ဆောင်မှုအလိုက်
Lodging House ဆိုရင် အိပ်ရုံပဲရပါမယ်။
Inn ဆိုရင် အိပ်ခန်း ၊ ရေချိုးခန်းတွေပေးပြီး အစားအသောက်မပေးပါဘူး။
Motel ဆိုရင် ကားရောလူပါ နားနေ တည်းခိုစားသောက်လို့ ရမယ်။
Hotel ဆိုရင် အိပ်ခန်း ၊ ရေချိုးခန်း ၊ အစားအသောက်ပါ ပါရပါမယ်။ အဲဒီမှာမှ ပေးထားတဲ့ Facility ပေါ်တည်ပြီး Star တွေသတ်မှတ်တာပါပဲ။
ဒါတွေကို ကျမ မိတ်ဆွေတွေလည်း သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Registration သွားလုပ်ချိန်မှာ အခန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲမေးပြီး အခန်းအရေအတွက်နည်းလို့ Hotel အဆင့်သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် Motel လို့ပဲ တပ်ခွင့်ရပါသတဲ့။
Internet ပေါ်ကနေ တည်းခိုဖို့ ကိုယ်တိုင် Booking လုပ် ၊ လျှောက်လည်မယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေ အတွက်တော့ သူတို့သိထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မတူတာကို သိပါများလာရင် New Terminology တွေများ Dictionary ထဲထည့်ဖို့ လုပ်ကြလေမလားလို့သာ တွေးမိပါတော့တယ်။
လူဆိုတာ အမှားမကင်းတာ သဘာဝမို့ မှားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လူအများနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ အလုပ်တွေမှာတော့ အများရှေ့ကို ထုတ်မပြခင် Check,Recheck,Countercheck system လေးကိုသာ ပြန်လည်ကျင့်သုံးကြရင်ဖြင့် အမှားတွေ နည်းသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။တိုးတက်ချင်ရင် အမှားနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ကြိုးစားကြရပါမယ်။
naywoon ni says: တစ်​ခုခု လွဲ​ချောသွားတာမျိုး ​နေ၀န်းနီတို့ အ​ပြောင်​အပျက်​ ​ပြောခဲ့ဖူးသား ။ ” ဒါ မြန်​မာပြည်​ ​လေ ဒီ​လောက်​လွဲ ​ချောမှု​တော့ ရှိလိမ့်​မ​ပေါ့ ” လို့ ။ ခုမှ သိလိုက်​ရတာက ငါတို့​တွေ တစ်​သက်​လုံး လွဲ​ချော ​နေခဲ့တာပါလားလို့ ။
ခင်ဇော် says: ကောင်းလိုက်တာ အာတီဒုံရေ။
ရီစရာ ပြောရမယ်ဆိုရင် မင်းသားကြီး သားနဲ့ ငြင်းရင်း အရှက်ကွဲဖူးတာလေး ပြောချင်ထာ။
ကျနော်တို့ ဆန်းကစ်သီးလို့ ခေါ်တဲ့ အသီးက ဒီမှာ Orange လို့ ခေါ်ပြီးးး
ကျနော်တို့ လိမ္မော်သီးလို့ ခေါ်တဲ့ အသီးကို သူတို့ က Mandarin လို့ ခေါ်ကြတယ်။
အဲဒီမှာ ကျနော် က ကမ္ဘလာ သီး (စာလုံးပေါင်း မပေါင်းတတ်) ကို ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိ လည်ထွက်သွားရော။
လမ်း ကိစ္စကတော့ ဒီမှာ အဲလို တွေ ခွဲသုံးကြလို့ လိုက်ဖတ်ရင်း မှတ်ထားလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန် မန်းလေး လိပ်စာကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးရင် ကြောင်နေတုန်းပဲ
Expressway တို့ လည်း ကျန်သေးတယ်။
• A highway isageneric term given to roadways that are used to connect important cities, and usually have4lanes to provide for high speed traffic.
• An expressway isahighway with partial access and extra facilities like access ramps and lane dividers.
တည်းစရာ နေရာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောပြီးရင် ဗမာလို ဘယ်လိုခေါ်မတုန်း စဉ်းစားရမလားမသိ ဟိုတယ်၊၊
ဆက်ရှင်အလိုက်နေလို့ရတဲ့ နေရာ (ခွီးခွီးခွီး) စသည်ဖြင့်ပေါ့။
padonmar says: ဇီကလေး ဖြည့်တဲ့ လမ်းတွေလည်း မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အခု နောက်တိုး တခုရှိသေးတယ်လေ။ အလုံပိတ်တဲများ တဲ့။ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်နားမှာ။
ဒီပို့စ်က ရေးထားတာ ကြာပြီ။ဖီးလ်မလာလို့ မတင်ဖြစ်တာ ။ခုတလော စာမေးပွဲမေးခွန်းမှာ တပည့်ဝတ်နဲ့ သားသမီးဝတ်လွဲတာရယ်။51th street ,52rd Street ဆိုင်းဘုတ်ရယ်လည်း တွေ့တော့ ပြန်ရှာဖွေတင်လိုက်တာ။
Wow says: Lane ကို မြန်မာမှုပြုပီး လမ်းလို့ ပြောင်းခေါ်ပီး သကာလ နောက်ပိုင်း Lane လို့မသုံးတော့ပဲ Street တို့ Road တို့ပဲ သုံးကြတော့တယ်…
padonmar says: မမဝေါင်း
padonmar says: အဘနီရေ၊မှားတာတော့ မဆန်းဘူး။မှားမှန်းသိရင် အမှန်ပြင်ဖို့လိုတာ။အများညီတာပဲ ဤကိုကျွဲသာဖတ်တော့လို့ မထားသင့်ပါဘူး။အမှား ညွှန်ပြတဲ့သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာ။
သူများကိုသာ ထောက်ပြတာ ကိုယ်မှားတာ ကိုယ့်ဖာသာ Recheck လုပ်လိုက်တော့ 2015 အောက်တိုဘာမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံလို့ရေးမိသွားတယ်။အဲဒါလေး ပြန်ပြင်သွားပါတယ်။
padonmar says: အမှန်တော့ ကိုယ်လည်း အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ပါဘူး။ထင်တာ ရမ်းကြိတ်တာ။
တီချာကြီးက မှန်မမှန် ရေးပေး၊စစ်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တမ်းတမိတယ်။
kai says: အင်တာနက်ထဲကတွေ့တာကို.. အထောက်အကူရအောင်တင်ထားတာပါ…။
What’s the difference between an Ave, Rd, St, Ln, Dr, Way, Pl, Blvd etc. and how is it decided which road is what?
An avenue runs north south. Avenues and streets may be used interchangeably for directions, usually has median
a court usually ends inacul de sac or similar little loop
a plaza or square is usuallyawide open space, but in modern definitons, one of the above probably fits better foraplaza asaroad.
uk,aclose is similar toacourt,ashort road servingafew houses, may have cul de sac
run is usually located nearastream or other small body of water
place is similar toacourt, or close, usuallyashort skinny dead end road, with or without cul de sac, sometimes p shaped
a motorway is similar toahighway, with the term more common in New Zealand, the UK, and Austrailia, no stopping, no pedestrian or animal traffic allowed
a turnpike is part ofahighway, and usually hasatoll, often located close toacity or commercial are
landing usually nearadock or port, historically where boats drop goods.
walk historicallyawalking path or sidewalk, probably becamearoad later in its history
grove thickly sheltered by trees
copseasmall grove
driveway almost always private, short, leading toasingle residence orafew related ones
laneway uncommon, usually downacountry road, itselfapublic road leading to multiple private driveways.
trace beaten path
circle usually circles around an area, but sometimes is likea“square”, an open place intersected by multiple roads.
channel usually nearawater channel, the water itself connecting two larger bodies of water,
grange historically would have beenafarmhouse or collection of houses onafarm, the road probably runs through what used to beafarm
park originally meaning an enclosed space, came to refer to an enclosed area of nature inacity, usuallyawell decorated road.
mill probably near an old flour mill or other mill.
spur similar toabyway,asmaller road branching off fromamajor road.
bypass passes aroundapopulated area to divert traffic
roundabout or traffic circle circle aroundatraffic island with multiple connecting routes,aroundabout is usually smaller, with less room for crossing and passing, and safer
wyndanarrow lane between houses, similar to an alley, more common in UK
drive shortened form of driveway, notadriveway itself, usually inaneighborhood, connects several houses
parade wider than average road historically used asaparade ground.
terrace more common in uk,arow of houses.
chase on land historically used as private hunting grounds.
branch dividesaroad or area into multiple subdivisions.
padonmar says: အိုး…..ကိုယ်မသိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးပါလား။ကျေးကျေးသူကြီး။
American English /Queen’s English ကလည်း ကွာတတ်တယ်နော်။
kai says: အရင်ကထင်နေတာက.. လိမ္မော်ရောင်အသီးအကုန်.. မြန်မာတွေလိမ္မော်သီးလို့များ သိမ်းကြုံးခေါ်နေသလားလို့..
Lane ကို မြန်မာတွေ.. လမ်းလို့ခေါ်လိုက်တာလို့.. မှတ်ဖူးပါတယ်..။ Wow မမမှန်ပါကြောင်းနဲ့.. ယူအက်စ်မှာ.. ဖရီးဝေးတွေကို.. ၅လမ်းသွား… ၆လမ်းသွား.. တွေမှာ.. Lane ခေါ်ပါတယ်..။
အိမ်ဘေးနားက.. လမ်းမကြီးက.. Blvd. ဘိုးရုဗာ့ဒ်။ အခုသံရုံးအသစ်ဖွင့်မယ့်လမ်းကလည်း.. ၀ါလ်ရှဲဘိုးရုဗာ့ဒ်။
ဟောလိဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီးတွေကဲကြတဲ့.. ကလပ်တွေများတဲ့လမ်းရှည်ကြီးကလည်း.. ဆန်းစက်ဘိုးရုဗာ့ဒ်။
စိတ်ထဲ.. ဘိုးရုဗာ့ဒ် ကတော်တော်ရှည်တဲ့လမ်းတွေကို ခေါ်တယ်ထင်တာပဲ..။
ယူအက်စ်မှာ.. အတိုကောက်ရေးကြတဲ့.. Ave, Rd, St, Ln, Dr, Way, Pl, Blvd တွေကတော့ အသုံးအများဆုံးတွေဖြစ်ပါကြောင်း..။
Hotel, Motel, Inn တွေကိုတော့.. မြန်မာလိုထက်.. အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာပိုကောင်းမယ်ထင်တာပါပဲ..။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်… ကိုယ်… မားကက်တင်း.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့..။
ခုလိုကမ္ဘာကြီးက.. အင်တာနက်ကျေးဇူးနဲ့အကုန်ဆက်စပ်ကုန်တဲ့အခါ.. တကမ္ဘာလုံးက.. အမည်တွေ.. နာမယ်တွေ.. မြန်မာမှုပြုသင့်တာပြု.. မွေးစားသင့်တာမွေးစားနဲ့.. မြန်မာစာပေ.. စကားတွေအတွက်.. မြန်မာပြည်က.. တက္ကသိုလ်.. ပညာရှင်တွေပေါင်းပြီး.. စနစ်တကျလုပ်သင့်လှပါပြီ…။
အဲလိုစနစ်တကျမလုပ်ရင်.. ငွေကြေး..ဘစ်ဇနက်တွေမှာ နစ်နာကုန်မှာပါ..။
အထူးသဖြင့်… အာမခံတွေဝင်လာတဲ့အခါ.. အဲဒီနာမယ်အသုံးအနှုံးတွေကြောင့်.. လျှော်ကြေးငွေရတာ.. များ/နည်းဖြစ်ကုန်မှာပါ…။
နိုင်ငံတော်ကို.. အကြံပေး.. တိုက်တွန်းပါကြောင်း…။
Courage says: Orange နဲ့ Tangerine ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော်လဲ ပြသနာ တတ်ဖူးတယ်။ လိမ္မော်သီးဆိုပြီး Orangeကို ၀ယ်လိုက်တာ လျက်ဆားနဲ့ တို့စားလိုက်ရပါပေါ့လား။
အမှတ်မဲ့(သို့)မသိလို့ ပြုမိတဲ့အမှားတွေက အချိန်ကာလ တိုက်စားလာတာနဲ့အမျှ အမှန်ဖြစ်မသွားခင် လေ့လာ သင်ယူစရာ အမှန်တွေကို ဖေါ်ပြ ပေးတဲ့အတွက်က ကျေးဇူးပါ
moonpoem says: အန်တီဒုံရဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရသွားလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် အန်တီရေ့ ။ မြို့ထဲ က ၁၃လမ်းမှာလည်း တွေ့ ဖူးတယ် ဘာလဲ 13rd Stလို့ မရေးဘဲ 13th St လို့ရေးထားတာလေ။
padonmar says: လကဗျာလေးနောက်တာလားဟင်။
အင်္ဂလိပ်တွေဟာလေ အတော်ဂွကျတဲ့ လူမျိုး။
Put ပွတ် But ဘတ် ပြီး Cut ကတ် တဲ့ လူမျိုး။
မြစပဲရိုး says: အစ်မ ဒုံ
Orange က မူရင်း root ဖြစ်ပြီး သူ့ အောက်မှာ အမျိုး တွေ ကွဲ သွားတာ လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီမှာတော့ satsuma ၊ mandarins၊ clementines လို့ ခေါ်ပြီး ရောင်းတာများ တယ်။
Trifoliate orange (Poncirus trifoliata), sometimes included in the genus (classified as Citrus trifoliata). It often serves asarootstock for sweet orange trees, especially asahybrid with other Citrus cultivars. The trifoliate orange isathorny shrub or small tree grown mostly as an ornamental plant or to set up hedges. It bearsadowny fruit similar toasmall citrus, used to make marmalade. It is native to northern China and Korea, and is also known as “Chinese bitter orange” or “hardy orange” because it can withstand subfreezing temperatures
. နောက်ပြီး တစ်နေ့လုံး ဖွင့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ချို့ က လဲ Inn လို့ နာမည်တပ် တာလဲ ရှိတယ်။
ဒါကို သိတာ မကြာသေး။
အမေရိကန် အသုံး နဲ့ အင်္ဂင်္လိပ် အသုံး ကွဲတာ လဲ အများကြီးဘဲ။
ဥပမာ – Rotary နဲ့ Roundabout
Diaper နဲ့ Nappy
Orange က မျိုးရင်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။
ကိုယ်တွေကလည်း မျက်စိနဲ့ ရွေးဝယ်ရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး။အဲဒီအတိုင်း နိုင်ငံခြားသားကို ၀ယ်ခိုင်းရင်/နိုင်ငံခြားက Grocery store တွေမှာ ၀ယ်ရင် စားချင်တာက အခွံခွာစားရတဲ့ လိမ်မော်သီး၊ရလာတာက လျက်ဆားနဲ့ တို့စားရတဲ့ ရှောက်ချိုသီး ဖြစ်နေမှာ။
ပြောရမှာ ရှက်လို့ ကြိတ်မှိတ်စားလိုက်ရင် နောက်လူတွေလည်း ထပ်ထပ်မှားကြတော့မယ်။လိုချင်တာ မရဘူးပေါ့။
Second language သမားချင်းကျရင် တခါတလေ Body Language လေးပါထည့်ပြီး ပြေလည်ကြရတဲ့ အခါတွေလည်း ရှိပါရဲ့။
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော် တိဒလောက်တော့စ် Boulevard ဆိုဒါ မြို့တွင်းကိုပါ ဖြတ်သွားတဲ့ ခြောက်လမ်း ရှစ်လမ်း ဟိုဖက်ဒီဖက် အစုန်၊အဆန် သွားတဲ့ လမ်းမကျယ်ဂျီးဗာစ်။ မြို့ဧရိယာ တိုးချဲ့လာလို့ လမ်းဖြတ်ကူးသူဒွေနဲ့ မလွတ်မကင်း ဖြစ်ပုံရပါဒရယ် ခိုနီ အာတီဒုံဂျီး ခင်ညား..
Alinsett@Maung Thura says: ဘိုဘာသာ မှားတာ ထားပါဦး
မိခင်ဘာသာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံတောင် မှားနေတာတပုံကြီး..
ကျနော် အဲ့အမှား ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက် ရိုက်ထားတယ်။
မြို့ထဲက ဈေးမရောင်းရဆိုတဲ့ နေရာမှာထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်မှာ.. ရေးထားတာက
.ရေးတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာမှာ သိတဲ့သူမရှိဘူးလားလို့..တွေးမိ..
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: Tangerine ကိုမိုဘိုင်းအဘိဓာန်​မှာရှာ​တော့ ထည့်​မ​ဖော်​ပြထားဘူးတီဒုံ။
အမှား​လေး​တွေ ​ထောက်​ပြ​ပေးသွားတာ ဗဟုသုတရပါတယ်​
black chaw says: ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်တန်ဘိုးရှိသော ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။
Shwe Ei says: -babylon dictionary မှာ ဂလိုတွေ့တယ်ခည..
-avenue (n.) road, street, boulevard
-အနော့်စိတ်ထဲမှာ University Avenue Road လို့တွေ့တိုင်း တက္ကသိုလ်ရယ် ရိပ်သာရယ် လမ်းရယ် ဆိုပီး -ခွဲမှတ်ထားတာ…Avenue မြင်တိုင်း ရိပ်သာလို့ ဘာသာပြန်မိနေရော..
-နမော်နမဲ့နိုင်လိုက်ပုံများ..ဒီပို့စ်မဖတ်မိမချင်း သိမှာ မှုတ်ဖူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: တုံးချက်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ခုမှ သေချာသိတာ..
အရင်ကတော့ road ဆိုတာ ဟိုင်းဝေးလမ်းနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ လမ်းမကြီးလို့ မှတ်ထားဖူးတယ်…
ကျန်တာတွေက Street ပေါ့..
နောက် တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ ပြင်သစ်စာမှာလည်း Avenue နဲ့ Boulevard ကို သင်ရတယ်… အဲ့တော့မှ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ရှာဖြစ်တာ… ကျန်တဲ့ စကားလုံးတွေကတော့ ခုမှ သိတာ အာတီဒုံ.. ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်..
Tourism ထဲမှာနေပြီး hotel, motel, inn စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို သေသေချာချာ မကွဲခဲ့ပါကြောင်း ရှက်ရှက်နဲ့ ဝန်ခံပါတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ဟုတ်တာပေါ့ ဒေါ်ဒေါ် လွယ်မယောင်နဲ့ ခက် တိမ်မယောင်နဲ့နက်ပဲ
သေးသေးလေးကစပြီး သတိထားပြင်မှ နောင်အဆင်ပြေမှာ
ဒေါ်ဒေါ်တို့လို လူတွေ များများပြောပေးမှ
အလုပ်မှာတော့ ကိုယ်မသိရင်သူတို့ မေးလိုက်တာပဲ ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဆိုပြီး
ကိုယ်တွေ Duster ခေါ်တာသူတို့က Eraser တဲ့
ကိုယ်က canteen ခေါ်တာ သူတို့က cafeteria တဲ့
အလွဲတွေမှ အများကြီး hurry အသုံး ရော ကျေးဇူးစကားကို ကိုယ်က လွယ်လွယ် Thank you ပဲ ရေလဲသုံးတာ
ကိုယ်က ဆီိပြောရင် သူတို့က ဂက်စ်တဲ့
လုပ်ငန်းခွင်က သင်ပေးတာတွေ အများကြီး ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တော့လည်း မှားကြတယ် မှားတာကိုလည်းစနစ်တကျပြင်မှ အခု ခေတ်က မှားလို့ မရတော့ဘူး အင်တာနေရှင်နယ် (တကယ်သင်တဲ့ကျောင်း)တွေ ပေါ်လာတာ တခုတော့ ကောင်းတယ်
အစကနေစသင်တဲ့ ကလေးတွေ အထက်တန်းပြီးရင် သူတို့ တတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာက စနစ်ကျတယ်
အခုပြောတဲ့ လမ်းတွေ သူတို့ကို သာခွဲခိုင်း ဖြောင့်နေအောင် ခွဲတတ်တယ် (ကိုယ်သာလွဲတာ )
အလယ်က ဖောက်တတ်တဲ့ လအော့လအယ်ကလေးတွေကတော့ ဇော်ကန့်လန့်တွေ ဒါကကောင်းတာကို ပြောတာ မကောင်းတာလည်း ရှိပါ့
Mike says: .ရွာထဲမရောက်တာကြာသွားလို့ အာတီဒုံပို့စ်ဖတ်တော့ ကွန်မန့်တွေများနေပြီ
ဦးဦးပါလေရာ says: .တချို့ဟာ​တွေ ဒီပိုစ့်​ဖတ်​ရမှ​သေ​သေချာချာသိ​တော့တယ်​
.အမဒုံနဲ့ သူကြီးကို ​ကျေးဇူးပါဗျာ…